Monday, Nov, 02, 2020 १७ कार्तिक २०७७, सोमबार
साहित्यकारका आँखामा कान्तिपुरी
हरेकपल सम्वाददाता ६ मंसिर २०७७, शनिबार १६:३२
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र सयौँ हिमशिखर, हज्जारौँ नदीनाला, ताल/वनजंगल आदि सुसज्जितबाट उर्वरा स्वरूपको भौगोलिक नाम हो– नेपाल । ‘नेपाल सुन्दर शान्त विशाल’ महाकवि देवकोटाले गाएको विश्वको सर्वश्रेष्ठ देश नेपाल ।
प्राचीन ऐतिहासिक प्रारम्भदेखि नै ‘नेपाल’ नामबाट प्रसिद्धि पाएको यो उपत्यका विश्वका सुन्दरतम् स्थानमध्ये एक हो । मल्लकालमा ‘काष्ठमष्डप’ नाम राखिएपछि त्यसैको अपभ्रंश रूप काठमाण्डु र आधुनिक काठमाडौँ– एक समय अर्थात् लिच्छविकाल र मल्लकालमा समेत ‘कान्तिपुर’ नामले चिनिन्थ्यो । पृथ्वी नारायणको एकीकरण अभियानका बेला यहाँका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुरका राजा थिए । उपत्यकामा तत्कालीन भादगाउँ, पाटन र कीर्तिपुर नगर राज्यको तुलनामा कान्तिपुर– वर्तमान वसन्तपुर र वरपरको क्षेत्र रमणीय र सम्पन्न राज्य थियो ।
कान्ति–शोभा सुन्दरताको पुर–नगर अर्थात् तत्कालीन ‘कान्तिपुर’ले पृथ्वीनारायणको हृदय जितेको थियो । ‘यसलाई राजधानी बनाउन पाए आहा !’भन्दै लालायित भएर उनले आक्रमणको पहिलो लक्ष्य विन्दु बनाएका थिए । जयप्रकाश मल्ललाई पराजित गरेर कान्तिपुरर हात पारेपछि मात्र पृथ्वीनारायणले वरपर हात फैलाएर आजको सिङ्गो नेपाल बनाएका हुन् ।
कान्तिपुर– लिच्छविकालको स्वर्णिम नगर मानिन्छ । सभ्यता–संस्कृति, सम्पन्नता र अन्य कतिपय कारणले गर्दा चीन–भारत र अन्यत्र समेत यो राज्य चर्चित थियो । मञ्जुश्री– स्वयम्भू र बुद्धका विभिन्न शक्तिपीठका अतिरिक्त वास्तुकला, स्थापत्यकला र अन्य असङ्ख्य सांस्कृतिक सम्पन्नताले पनि यस नगरको प्राचीनकालदेखि नै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हो । जयस्थिति मल्लको चार वर्ण छत्तीस जात र विभिन्न सामाजिक विभाजनले बहुजातीय– बहुसांस्कृतिक नगरीका रूपमा सयौँ वर्षदेखि स्थापित यो नगर देशको बौद्ध र हिन्दू धर्मको राजधानी समन्वय एवं सहिष्णुताको उदाहरण पनि हो ।
प्राचीन सभ्यता, संस्कृति–शान्ति–सद्भाव र समन्वय–सङ्गम यस नगरीले आफ्नो वक्षमा धेरै लामो इतिहास बोकेको छ । यस कान्तिपुरले, दिवोदास, यलम्बर किराँतवंश, गोपाल, आभीरवंश हुँदै लिच्छवि एवं मल्लहरूको चरितार्थ बोेकेको छ । पृथ्वीनारायणदेखि जंगबहादुर र ज्ञानेन्द्रसम्म हुँदै विविध चर्तिकला भोगेको छ । विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल, शक्ति होडबाजी– भण्डारखालकाण्ड र कोतकाण्ड जस्ता असङ्ख्य काण्ड झेलेको छ । नब्बे सालको महाभूकम्पले अधमरो बनेको यस नगरीले पुनः बिउँझिएर सिंहदरबार र नारायणहिटी दरबारसमेत धान्दै आएको छ । कान्तिपुर– आजको काठमाडौँ सहर भाषा–साहित्य र संस्कृतिको विकासमा समेत देशकै प्रभुत्व केन्द्र बनेको छ । नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा विकसित गराउने र जनभाषाका रूपमा प्रसार गराउने श्रेय पनि यही कान्तिपुरलाई छ । पुण्य मल्ल–भूपतीन्द्र मल्ल–प्रताप मल्लका अभिलेखहरूबाट सुरू भएर पृथ्वीनारायणबाट राजभाषा बनाइएको नेपाली भाषाको संरक्षण कान्तिपुरबाटै भयो । यसरी नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीवृद्धिमा पनि यस नगरको अमूल्य देन छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले विश्वसमृद्ध यस नगरीको महात्म्य कवि कलमबाट प्रथमपल्ट यसरी गुन्जिएको पाइन्छ :
चपला अबलाहरु एक् सुरमा,
गुनकेसरिको फुल ली शिरमा।
यति छन् भनि गन्नु काहाँ धनि ञाँ,
खुसि छन् बहुतै मनमा दुनिञाँ।
जनकी यसरी सुखकी सगरी,
अलकापुरि कान्तिपुरी नगरी।।
कहिँ भोट र लण्डन चीन सरी,
कहिँ काल् भरि गल्लि छ दिल्ली सरी।
तरबार कटार खुँडा खुकुरी,
पिसतोल र बन्दुक सम्म भिरी।
अतिशूर र वीर भरी नगरी,
छ त कुन् सरि कान्तिपुरी नगरी।।
रिस राग कपट् छल छैन जाँहाँ,
तव धर्म कती छ कती छ याहाँ,
शिवकी पुरि कान्तिपुरी नगरी।
कवि भानुभक्त आचार्य– कान्तिपुरबाट धेरै टाढा तनहुँ क्षेत्रका भए पनि राजधानीमा आउनै पर्थ्यो । जागिर खान, पढ्न केही उन्नति गर्न चाहनेलाई त्यसबेला पनि कान्तिपुरले तानिहाल्थ्यो । भानुभक्त पनि जागिरे थिए । अनि जागिरका क्रममा केही हिसाब फर्स्यौट नगरेको भनी अभियोग लागेका कारण भानुभक्तले कुमारी चोक जेल पनि बस्नुपर्यो । त्यही जेल बसाइमा भानुभक्तले रामायण काव्य र केही फुटकर कविता रचेका थिए । कान्तिपुरबाट पाएको व्यथा पनि यसरी कवितामा पोखेका थिए :
होमनाथ खतिवडा/ शिखरनाथ सुवेदी/ लक्ष्मीदत्त पन्त र प्रसिद्ध भाषा साहित्यसेवी मोतीराम भट्टजस्ता स्रष्टाहरू यसै नगरीमा जन्मिएका थिए ।
अचल् झण्डा फर्कोस् फरफर गरी कान्तिपुरीमा
रिपुको मन् थर्कोस् थरथर गरी छीन भरिमा
यवन्ले राज् गर्दा कति पतित हिन्दु स्थल भयो
मोतीरामको ‘कान्तिपुरी’ अझसम्म चम्किएकै छ । त्यसबेला मोतीरामको कलम मार्फत् सुशोभित भएको कान्तिपुर अझ पनि उस्तै छ ।
गिरिशवल्लभ जोशी/ सदाशिव शर्मा/ राममणि/ सोमनाथ/ बाबुराम आचार्य/ शम्भुप्रसाद ढुङ्ग्याल, रुद्रराज पाण्डे, पुष्करसमसेर, बालकृष्ण सम, बदरीनाथ भट्टराई आदि कान्तिपुरका उपज साहित्यिक हुन् भने चक्रपाणि/ लेखनाथ/ गुरूप्रसाद मैनाली/ कोमलनाथ आदिको साहित्य साधना केन्द्र कान्तिपुर नै हो ।
सभ्यता हाम्रो नेपाल राम्रो स्वर्ग झैँ पवित्र
लुकेको स्वर्ग समुच्च जाति यस्का छन् विचित्र ।
अमर महाकवि देवकोटाको जन्म–कर्मस्थल कान्तिपुरीको महात्म्य जति गाएर पनि सकिन्न । भीमनिधि तिवारी/ नयराज पन्त/ गोपाल पाँडे/ हृदयचन्द्र सिंह र गोपालप्रसाद रिमालको जन्म–कर्मक्षेत्र कान्तिपुरी– सिद्धिचरण, माधव घिमिरे, केदारमान व्यथितको कर्मक्षेत्र र साधनाभूमि हो ।
जय नेपाल ! जय नेपाल !! कर्म अरू तपभूमि
नेपाल यो पवित्र नाम ऋषिहरूको शुद्धधाम ।
गीत हुन्थ्यो वेद, साम सब्को हुन्थ्यो पूर्ण काम
आर्यावर्तको यो श्वास स्वर्गभूमि यो हो खास ।।
सहिद शुक्रराज शास्त्रीद्वारा यसरी गाइएको यो कान्तिपुरी आज पनि सुन्दरता/ कठोरता/ विभत्सता / कोमलता/ सुख–दुःख/ पीडा/ प्रेम–घृणा/ सच्चरित्र–दुश्चरित्र–समृद्धि–दरिद्रता आदिको सङ्गम छ ।
कविहरू विभिन्न दृष्टिले हेर्ने गर्छन्– काठमाडौँ अर्थात् कान्तिपुरलाई ।
मुलुकभरिका कवि लेखकहरू यस कान्तिपुरीमा रहेर मात्र आफ्नो व्यक्तित्व कृतित्वलाई चम्काउन र समर्थ हुन सकिन्छ– भनेर लागिपरेका छन् ।
धरणीधर, सूर्यविक्रम, लैनसिंहको व्यक्तित्व–कृतित्व यहीँ बढ्यो । धर्मराज थापाले यहीँ बसेर गीत गाउने कला बुझे । कृष्णचन्द्रसिंह, गोविन्दबहादुर मल्ल, विजय मल्ल, खेताला/ विकल/ मोहन कोइराला/ वल्लभ/ भूपि/ पोषण सबैसबै कान्तिपुरीभित्र रमेका हुन् । वर्तमान पुस्ताले पनि आफ्नो साधनाकेन्द्र कान्तिपुरीलाई नै बनाएका छन् ।
कविहरू कान्तिपुरीलाई यसरी हेर्छन् :
– उनीहरू जो नेपाल बोल्दै राजधानी मेला भर्न आएका थिए
फर्के फर्केनन् ।
– काठमाडौँ एक्लैले अब सिङ्गोे नेपालको अर्थ लाउन सक्तैन ।
– माग्नेको ट्वाक…… काठमाडौँ
उच्चवर्गीयहरू काठमाडौँ खाल्डो च्याँखे थापेर बसेका छन् ।
– सिंहदरबारसम्म कुनै गाउँको गोरेटो पुग्दैन
त्यसैले पहिरोले पुरिएको गाउँको समाचारले सिंहदरबारलाई छुँदैन ।
– यो बढ्दो विपन्नता र अभावको अगाडि
यो बढ्दो काल मृत्युको अगाडि
एउटा रानीपोखरी अब अपर्याप्त साबित भइसकेको छ ।
देशमा रानीपोखरी नै रानीपोखरीको आवश्यकता छ ।
– काठमाडौँ तिमी, छिमेकी र आफन्त मर्दा
तिम्रो लास उठाउन मलामी दिँदैन ।
– बजाउँदै शान्ति ॐ शान्ति घण्टहरू
कसले भगाउँदैछ स्वयम्भूका परेवाहरू
– यो राजधानी हो, कृपया छेउ लागेर हिंड्नुहोस्
– हङ्कङ् प्यारिस् र ब्याङ्कक भ्रमण गर्न
लाइसेन्स खोजिरहेछ स्वयम्भू
– राजधानीले देश खोज्नुपर्ने सहर
– मान्छे बगाउँछ यो सहरमा हल्लाको बाढीले
मूलढोकाको साँचो हराएको छ काठमाडौँमा एउटा घरको
राजनीतिक नेता, कार्यकर्तादेखि जागिरे, व्यापारी ठेकेदार–मजदुर, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, अपाङ्ग, जनजाति आदि सबैको आश्रयस्थल यो कान्तिपुर – विविध भाषासाहित्यको साधना सङ्गम बनेको छ । जनसम्पर्क र राजभाषा नेपाली बाहेकका अन्य राष्ट्रभाषाहरू पनि कान्तिपुरी टेकेपछि मात्र ब्युँझन्छन् । भाषाको महत्त्व सम्बन्धित भाषाभाषी क्षेत्रमा भन्दा कान्तिपुरमै मात्र प्रष्ट हुन्छ । कान्तिपुर टेकेपछि साधारण व्यक्ति पनि जानिफकार बन्न कर लाग्छ । यहाँको माटो–हावापानी नै यस्तै छ । सबैलाई आकर्षित गरेरै छोड्दछ । जतिसुकै कष्ट–दुःख झेल्नुपरे पनि एकपल्ट पसेपछि कान्तिपुरलाई कोही पनि छाड्न चाहँदैन ।
यो सबै ‘कान्तिपुरी’कै कथा हो । काठमाडौँमा बस्ने प्रायः सबै कवि साहित्यकारहरू यहाँका विभिन्न पीडा व्यथा पोख्ने गर्छन् । ‘कान्तिपुर’मा अधिकांशले थप्पड–घुस्सा, लात्ती बेहोर्नुपर्छ । नियति हो । तर कोही पनि यसलाई छोडेर अन्यत्र जाने कुरा चाहँदैनन् । प्रत्येक क्षेत्रमा उन्नति–प्रगति गर्न चाहनेलाई चाहे–सोच्न पनि राजनीतिमा/ समाजसेवामा/ व्यापारमा/ पत्रकारितामा/ साहित्य–साधनामा अर्थात् जुनसुकै कुरामा होस् कान्तिपुरीको बास चाहिन्छ । त्यसैले ‘कान्तिपुर’मा सबैखाले बसोबास छ । पीडा र सन्त्रासभित्र पनि जीवनको आस छ– यस कान्तिपुरीमा ।
(साभार : प्रज्ञान, वर्ष : १, अंक : १, २०७६ )
यस्ता कविता पढ्न पाउँदा हृदय पुलकित हुन्छ
बेवारिसे शव ब्यवस्थापनमा सरकारको साथ चाहियो : सपना..
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२७२ जनामा कोरोना संक्रमण..
कांग्रेसले सरकारविरुद्ध मंसिर २९ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने
देउवानिवासमा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सुरु
अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाललगायतको उपस्थितिमा दाहाल-नेपाल पक्षधर युवा-विद्यार्थी..
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले संवादहीनताको अन्त्यः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
नेकपा सचिवालय बैठक दिउँसाे बस्दै
हुम्लामा जिप दुर्घटना : ४ जनाको मृत्यु,..